« Antananarivo Ligne 11 »: Ranty mitety ny renivohitra, aseho amin’ny haikanto | NewsMada
« Antananarivo Ligne 11 »: Ranty mitety ny renivohitra, aseho amin’ny haikanto
Par Taratra sur 08/03/2021
Toy ny ahoana ny fivezivezena sy fifamoivoizana eto Antananarivo, araka ny fijerin’ny mpanakanto ? Mamaly izany ny ranty « Antananarivo Ligne 11 », misokatra ho an’ny rehetra etsy amin’ny lapan’ny Tanàna…
Mandeha « Ligne 11 ». Fiteny teto Iarivo nivoaka tany amin’ny faramparan’ny taona 80, ilana ny fandehanana an-tongotra. Nalaina tamin’izay ny anaran’ny tetikasa “Antananarivo Ligne 11”, izay maka endrika fampirantiana karazan-kanto, hitondran’ireo mpanakanto ny mpitsidika mitety ny renivohitr’i Madagasikara. Fampirantiana izay nomanina sy tohanan’ny Fondation H, miaraka amin’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo izy ity.
Mandalo etsy amin’ny lapan’ny Tanànan’Antananarivo ny fampirantiana, manomboka rahampitso alarobia 10 marsa hatramin’ny 29 marsa. Hanasan’ireo mpanakanto ireo mpitsidika, hiara-hitety an-tongotra sy anaty kanto an’Antananarivo izany. Aina Zo Raberanto, Bloumorof, Carine HCR, Didier Montagné, Gad Bensalem, Hazokely, Lowett, Sexy Expédition Yéyé, Tsiry Kely Panda, ary Yves Robinson no nanambatra ny talentany, namoaka ny “Antananarivo Ligne 11”. Hahitana mpaka sary, mpanao sary hosodoko sy sary sokitra, poeta sy mpanoratra, sns, izy ireo. Manampy izany ny haify, satria misy maneho ny tsenakely fijanonana, fakana tohan’aina, fisotrosotroana, izay manamarika indrindra ny tanàna maro eto an-drenivohitra izany.
Fijery hafa an’Iarivo
Ireo efa nitsidika ny ranty dia afaka manamafy fa manana fijery hafa kokoa momba an’Antananarivo rehefa avy ao. Hain’ireo mpikanto ny namoaka ilay fijery manaitra ny amparahatoka, mampivoitra ilay mampiavaka ny tanàna, eny na dia ny korontandrontana vokatry ny fitohanan’ny fifamoivoizana, ny tsena, ny alina mangina, sns. Hain’i Gad Bensalem tsara ny mandoko azy anatin’ny lahatsoratra mirima, maneho izay kanto fonosin’ny andavanandro izay. Toa fiainana hafa koa anefa ny alin’Antananarivo, milamindamin-dratsy, araka ny asehon’ny sarin’i Aina Zo Raberanto. Miavaka indrindra koa anefa ny fampivadiana ny iainana, hita maso, ren’ny sofina, tsapan’ny tanana fa indrindra manintona ny orona ary voarian’ny lela amin’ny tontolo foronin’ny mpanakanto, toy ny nataon’i Myriam Mech amin’ny alalan’ny Sexy Expédition Yéyé.
Fijery hafa satria na eo aza ireo singa mampisy laza ratsy an’Antananarivo, mivoaka koa ny hakanton’ny tanàna rehefa lokoin’ny mpahay kanto: ambohipihaonana sy toerana manan-tantara ihany koa. Tsy natao fahatany ny firindran’ny ranty, fa maneho ny hita rehefa mandeha an-tongotra mihitsy: fitateram-bahoaka, lalana, tsena…
Misokatra amin’ny kanto
Ivon’ny tanàna, maneho ny endri-pitantanana ihany koa ny fisokafan’ny lapan’ny Tanànan’Antananarivo ho an’ny zavakanto. Efa nisy ny fampirantiana ireo hosodoko fananan’i Max et les ferailleurs manokana izay norasina tao, tsy ela akory izay. Mitohy amin’ity “Antananarivo Ligne 11” ity izany, izay mahakasika ny tanàna rahateo. “Misokatra amin’ny zavakanto koa, ary manome lanja izany ny fiadidiana ny tanàna. Ho maromaro ny hetsika ara-javakanto horaisina ato raha ny vinavina, hoy ny nambaran-dRavelomantsoa Elia, tale misahana ny zavakanto, ny kolontsaina ary ny fiarahamonina eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Manohana ny sehakanto marolafy ny Fondation H, natsanganan’ny filoha tale jeneralin’ny vondron’orinasa Axian. Angady nananana ny “Antananarivo Ligne 11” izy ireo, ary tao amin’ny toeram-pampirantian’ny Fondation H indrindra no nanomboka ity “dia an-tongotra” ity. Nialoha izao, efa nanome sehatra ireo mpanakanto teratany sy vahiny, nanohana ireo fandraisana anjara amina hetsika iraisam-pirenena toa ilay “pavillon de Madagacscar” nentin’i Joël Andrianomearisoa, nandritra ny “Biennale de Venise”, ny taona 2019 izy ireo. Nanohana hatrany ny “Prix Paritana” hatramin’ny nanombohan’ny taona 2016 ihany koa.